Ubuchwepheshe bamahhala bukhulisa umthelela wabo ekugembuleni nasekubhejeni online | Kusuka kuLinux
Luigys toro | | Izaziso
Zimbalwa izimboni namuhla ezihamba ngokushesha njengokugembula nokubheja online. Okukade kuncishiselwa egumbini elilodwa edolobheni ngalinye, namuhla kuveza inani elikhulu lezinketho kubathandi bemali elula ne-adrenaline ekhishwa yilezi zinhlobo zemidlalo. Emakethe lapho isidingo semikhiqizo, izinsizakalo nolwazi kukhula khona, ubuchwepheshe bamahhala buqhamuka ukunqoba izimakethe emhlabeni wonke. Lapha sikutshela okufanele ukwazi ngakho.
Uma ungumthandi wemidlalo ekhona kumakhasino kepha unovalo ngenani labantu ongabathola lapho, amakhasino aku-inthanethi angaba yisixazululo sakho. Lo mlenze wethebula elibanzi lokudlala uthola ukuzithokozisa ngokwengeziwe ngaphezu kwabanye futhi uthathwa njengenye yezimboni ezinamandla okukhula kakhulu eminyakeni ezayo. Lo mbono okhuthazayo udinga ukutshalwa kwezimali emhlabeni wonke futhi abanye abathuthukisi bemithombo evulekile babone indawo enhle kule ndawo yokwenza izixazululo zabo zande, bathuthukise ulwazi lwabo kulokhu okuhweba kakhulu.
Kulelo hlangothi, kuvele izinhlobonhlobo zemicroservices nezinhlelo zokusebenza zomthombo ovulekile ezisebenza ngokukhethekile ekunikezeni izixazululo kuzingxenyekazi zemidlalo, zisukela emibhalweni emincane eqinisekisa ukuthi amapulatifomu ekhasino aku-inthanethi awakwazi ukwephulwa kuma-algorithm wokubala indlela ezenzakalelayo yomkhawulo wenzuzo we-opharetha. Ngokunjalo, kunezinsizakalo zemithombo evulekile eziningana ezenzelwe abadlali, lapho bethola khona ukusebenza kokuhlaziywa kwemidlalo, ukubikezelwa kwemiphumela noma izibalo ezijwayelekile.
Njengamanje sezivele zikhona amapulatifomu wokudlala ahlukahlukene asebenza ku-linuxKokubili kwimishini yama-slot yendabuko nakumakhasino aku-inthanethi aya ngokuya ethandwa kakhulu, ekugcineni umthelela wobuchwepheshe bamahhala mkhulu kakhulu, ngoba iningi lalawa asebenza kuzinkundla zamahhala zamahhala ezisingathwa ezinhlelweni ezisebenzayo ze-GNU / Linux. , ngaphezu kokusebenzisa uhlaka, izilimi ezihlelayo kanye nemininingwane yolwazi ngokuvamile emahhala.
Yize, kuze kube ngu-2012, ukugembula ku-inthanethi bekungewona umsebenzi olawulwa ngokuphelele, ukukhula okucacile leli gatsha ebelinakho ekugembuleni kusiphoqelele ukuthi siphinde sicabangele lolu daba futhi senze imithetho maqondana nalokhu, kanye nokwenza ngcono amakhono obuchwepheshe amapulatifomu, ngokufanayo, andise amacala okuba sengozini futhi abadlali bakhuphule ikhono labo lokuzivumelanisa nemikhuba yale midlalo. Impumelelo etholwe amakamelo abonakalayo bekufanele ithathwe ngumphakathi wesoftware wamahhala, ukuze ithole imithombo emisha yokutshalwa kwezimali nokwenza ukusetshenziswa kwayo kudume kakhulu.
Enye yezinkambu zobuchwepheshe ezungeze ukugembula lapho ubuchwepheshe bamahhala bunomthelela khona kuzicelo zabantu besithathu, lokhu ngokungangabazeki kuhlobene neqiniso lokuthi ama-40% wenzuzo yamanje yekhasino eku-inthanethi akhiqizwa kusuka smartphone, ngakho-ke yindawo lapho ukuziphendukela kwezobuchwepheshe kungapheli futhi kufanele kuvuselelwe njalo.
Ubuchwepheshe bamahhala buyaziswa, phakathi kwezinye izindawo, emhlabeni we cryptocurrencies ngenhloso yokugwema amabhamuza amakhulu aqhuma emehlweni ethu, kanye nokusebenzisa le nsiza yezezimali entsha ukuqala ukuxhasa ngezimali amaphrojekthi asafufusa nasungula izinto ezintsha.
Ubuchwepheshe bamahhala obusetshenziswa kumakhasino abanalutho lokufisa ubuchwepheshe bokuphathelene obusetshenziswa kumakhasino amakhulu emhlabeni jikelele. Ngokuvamile, lapho kuvulwa ikhasino enkulu ezweni elisafufusa, kunamahemuhemu okuthi kunobuchwepheshe bamahhala obunomthelela ngqo ezindabeni zabo ze-cyber, ngoba bathole udumo oluhle kakhulu emkhakheni. Isibonelo, kukhona amasayithi ahlola lobu buchwepheshe nakho konke okuthanda umsebenzi ojwayelekile wekhasino ngokujwayelekile.
Manje njengoba wazi, uma ucabanga ukungena ezweni lamakhasino kanye namakhasino aku-inthanethi, khumbula ukubuyekeza izindaba zakamuva kubuchwepheshe bamahhala nakumawebhusayithi akhethekile. Lowo msebenzi owedlule uzokusiza ukuthi wazi phambi kwabancintisana nabo abaningi imininingwane eminingi ebalulekile.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » Ubuchwepheshe bamahhala bukhulisa umthelela wabo ekugembuleni nokubheja okuku-inthanethi
Ungayisetha kanjani i-Brother laser printers ku-linux